LESOTHO, MASERU —
Kusarangwa kwevanouraya kana kushungurudza vatapi venhau kunoita kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitika izvo zvinove zvinokanganisa mabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa.
Maonero aya akabuda nezuro pamusangano wekuzeya mamiriro akaita kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa pamwe nemabasa ekutorwa kwenhau munyika dzemuAfrica uyo uri kuitwa muguta reMaseru muLesotho.
Vachitaura pamusangano uyu, chipangamazano munyaya dzekuchengetedzeka kwevatapi venhau musangano reUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organisation, UNESCO, Muzvare Lydia Gachungi, vakati pane vatori venhau vanosvika makumi mashanu nemumwe vakauraiwa vari pabasa munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica.
Muzvare Gachungi vakati panouraiwa kana kushungurudzwa vatori venhau, kashoma kuti nyaya idzi dziferefetwe zvizere kuitira kuti vanenge vaita izvi varangwe, vachiti maitiro akadai anokanganisa kuchengetedzeka kwevatapi venhau.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect, Amai Abigail Gamanya, vakati panyaya dzekuchengetedzeka pabasa kwevatori venhau, zvakakoshawo zvikuru kuti kutariswe matambudziko anosangana nevanhukadzi vanoita basa rekutora nhau.
Muzvare Gachungi vakabvumirana nemaonero aya vachiti ongororo yesangano reUNESCO inoratidza kuti kushungurudzwa kwevatapi venhau vechikadzi munyika dzemuAfrica kuri kuwedzera.
"Chinhu chinonetsa ndechekuti vemakambani ekutapa nhawu havana mitemo iripo yakajeka inobastira kuchengetedzeka kwevatapi venhau vechikadzi. Vanenge vanofunga kuti kushungurudzwa kana kuti matambudziko anosangana nevatapi venhau vechikadzi akafanana neevatapi venhau vechirume asi izvi hazvisi izvo," vadaro Muzvare Gachungi.
Muzvare Gachungu vakaudza Studio7 kuti ongororo yeUNESCO inoratidza kuti pane nyika makumi maviri neina dzemuAfrica dzave nemutemo wakajeka weAccess to Information unokurudzira kuti hurumende pamwe nemapazi adzo, makambani kana masangano akasiyana siyana, abudise pachena zvaanoita. Asi vakati dzimwe nguva kuve nemitemo yakadaro hakunyanyobatsira mumabasa ezvekutapwa kwenhau sezvinotarisirwa.
Sachigaro weSouthern Africa Editors Forum, SAEF, uye vari nhengo yekomiti yeThe African Editors Forum, TAEF iyo yakaronga musangano uyu, VaWillie Mponda, vakati sangano ravo rakaona zvakakodzera kuita musangano wakadai sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemabasa ekutapwa kwenahu uye kodzero dzekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa munyika dzemuAfrica.
Musangano wekuLesotho uri kuitika panguva iyo vanorwira kodzero dzevatori venhau muZimbabwe vari kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo ye Access to Information and Protection of Privacy Act, pamwe newe Criminal Law (Codification and Reform) Act zvichitevera kuvandudzwa kwemumwe mutemo wePublic Order and Security Act, uyo wava kunzi Maintenance of Public Order Act.
Musangano uyu uri kupindwa nevapepeti venhau, vatori venhau pamwe nemasangano akazvimirira anotsigira mabasa ekuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa kwevatori venhau.